दिमागका कोष हराउन नदिन ३५ वर्षपछि नियमित सेक्स जरुरी ! – Mission
19 September 2021 | आइतवार, अशोज ३, २०७८
दिमागका कोष हराउन नदिन ३५ वर्षपछि नियमित सेक्स जरुरी !
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस १४, २०७२
एजेन्सी– तपाई हामीमध्ये धेरै जनालाई थाहा भएकै कुरा हो ढल्किदो उमेरसँगै दिमागका कोषहरु पनि निष्क्रिय हुँदै र हराउँदै जान्छन् । ३५ वर्ष पुगेपछि हरेक दिन हामीले ७ हजार दिमागका कोषहरु गुमाउन थाल्छौं । सायद यो सुन्दा पनि जो कोहीलाई उदेक लाग्न सक्छ । तर खुसीको खबर पनि छ । नियमित रुपमा यौन सम्पर्क गर्नेको दिमागको कोषमा वृद्धि हुने अमेरिकास्थित प्रिन्सटन युनिर्भसिटीका वैज्ञानिकहरु बताउँछन् । प्लस ओनमा सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययन अनुसार सेक्सले स्मरण शक्ति रहने दिमागको कोषहरुमा तीब्र बृद्धि गरिदिन्छ ।
विज्ञहरुका अनुसार सेक्सको समयमा दुई ओठ यति कसिलो हुन्छ यो मुठी पारेको भन्दा सय गुना बढी हुन्छ । ‘चुम्बनले दिमागमा एउटा शक्ति पैदा गर्छ, तनाब न्युन गर्ने रसायन निस्काशन गर्छ र मुडलाई रमाइलो बनाउछ,’ घोष भन्छन् ।
सेक्सले दिमागमा रगतको प्रबाह बढाइदिन्छ जसका कारण अक्सिजनको मात्रा पनि बढ्छ । ‘यौन गतिविधिको बेला दिमागमा भएको न्युरोन सक्रीय र बढी अक्सिजनको उपयोग गरेको देखिन्छ,’ रुटगर्स युनिर्भसिटीका मनोचिकित्सक बारु कोमिसारुक भन्छन् ।
सेक्सले खुसी प्रदान गर्ने हर्मन निस्कासन गर्छ तसर्थ झटपट गरिने जंगली सेक्स भन्दा मायापूर्वक गरिने सेक्सले बढी हर्मन निस्काशन गर्छ । चरम आनन्दले पीडा गराउने सिग्नललाई रोकिदिने अर्का प्राध्यापक कोमिसारुक बताउँछन् ।
‘दिमागमा एउटा परिचित चक्र हुन्छ जसले मानिसलाई खुसी बनाइदिन्छ,’ युनिर्भसिटी अफ क्यालिफोर्नियाका स्नायुसम्बन्धी विज्ञ पउल थोम्पसन भन्छन् । सेक्सले डिप्रेसनको उपचार गर्नुका साथै दिमागमा न्युरो ट्रान्समिटरलाई बढी चलायनमान बढाई बढी रसायन उत्पादन गर्ने उनी बताउँछन् ।
विभिन्न यौन स्वास्थ्य अनुसन्धानहरुले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिएका छन् । यौन कार्यले महिलालाई डर, त्रास र चिन्ताबाट मुक्त गर्ने विज्ञहरु बताउछन् ।
त्यस्तै सेक्सलाई निन्द्राको औषधी नै भएको समेत डा घोष बताउछन् । ‘यदि तपाईँलाई रातभर निन्द्रा लागेको छैन भने सेक्सले औषधीको काम गर्छ,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार बिहान भन्दा रातको समयमा सेक्स उपयुक्त हुन्छ ।
सेक्सले मांशपेशीलाई आनन्द दिने र काँध तथा घाँटीको दुःखाई कम गर्ने डा घोष बताउँछन । त्यस्तै सेक्सले मुटुको रोग, हड्डी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने, पुरुष तथा महिलालाई बढी उर्वर बनाउने, प्रोटेस्ट क्यान्सरबाट बचाउने र तौल घटाउन समेत प्रभावकारी सिद्ध हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यो एउटा सम्बन्धको मुख्य चाबी पनि हो । किनकी सेक्सले सहानूभूति बढाउँछ । जसका कारण उनीहरु सेक्सपछि पुरुषसँग माया जालमा पर्छन् ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, पुस १४, २०७२ 10:04:03 AM |
Prevनाइजेरियामा आत्मघाती बम आक्रमणमा परी ५५ जनाको मृत्यु
Next‘मर्निङ वाल्क’मा निस्किएका सर्लाहीका एमाले नेताको हत्या